Semalt Expert: Sary SEO sy ny fahafahana azony
Ny horonan-tsary sy ny sary dia manolotra tsy manam-paharoa karazana fikarohana ary afaka manampy ireo pejy handefa hafatra samihafa amin'ny Google, Bing, Yahoo ary ny fitaovam-pikarohana hafa. Ny mpikaroka mpikaroka dia manombana ny lahatsoratry ny sary ary mifandray amin'ny votoatin'ny tranonkalanao. Tsy vitan'izy ireo fotsiny ny fanehoana sy ny fampisehoana ny lahatsoratry ny sary, fa ny fampiasana azy ireo koa ho loharanom-panampiana ny lanjan'ny pejy manokana. Voarakitra tsotra izao ny famoahana ireo sary, ary misy fomba sasantsasany hanampiana sipa SEO amin'ny sary - casino 5 dollar deposit.
Sary Alt Tag:
Ny sarin'ny alika alt dia manome ny fikajiana fikarohana momba ny sary mifanaraka amin'ny sary. Tags hanampy Google hahatakatra ny natiora sy ny hevitry ny sarinao ary ampiasain'ireo mpamaky. Ny sarin'ny alika sary dia manolotra asa roa (Accessibility) sy ny fanamafisana ny motera . Izany no antony tokony hifantohanao amin'ny fanoratana ny sarimihetsika alt tags ary mampiditra ny teny fototra ho azy ireo. Ny antonta fahitalavitra tsara dia manome sehatra manan-danja mahazatra ho an'ireo pejy ary manampy ny sary hahalalanao kokoa ny fikarohana.
Oliver King, ny Semalt Mpanantanteraka Success Manager, dia milaza fa tokony hitazona ny antonta antitra kokoa mihoatra ny karazany 130 ianao ary hisoroka ny teny filamatra..Ataovy azo antoka fa mitazana ny endriny ny lahatsoratra ary miresaka momba ny votoatinao fohy. Ambonin'izany fotoana izany, tokony hifehy ny habetsaky ny sary nalefa ianao ary tsy hampiasa ny al tags amin'ny sary miloko toy ny sary ety ivelany sy ny sary vongana na biby. Raha te hampiditra tags amin'ny Weebly ianao dia tokony hampiakatra ny sary amin'ny server ianao ary tsindrio ny safidy Advanced Text Alt .
Ny fanoratana dia manome fahafaham-po ny votoatinao, ary ny Google dia mijery lohateny mba hahafantarana ny toetry ny votoatinao. Ny fanoratana sary dia tsy fehezin'ny SEO, fa tsara kosa ny fahitana ny fahitsim-piainan'ny tranokalanao sy ny fahitana anao. Azonao atao ny manampy ampiana sary ao Weebly. Noho izany, tokony alefa ilay sary ary fidio ny safidy Caption.
Sary URL sy ny anaran'ny filaharan'ny sary: ​​
Zava-dehibe ny mametraka teny fanalahidy amin'ny anaranao, ary io no iray amin'ireo fomba fanao tsara indrindra SEO. Google sy ny fitaovam-pikarohana hafa dia mijery ny filaharan'ny sary ary manampy anao hampiakatra ny lanjanao amin'ny votoatiny ankapobeny. Ambonin'izany, mora amin'ny webmasters ny maka ny sarin'izy ireo dia miditra amin'ny fikarohana sary Google, mitondra fiara bebe kokoa hatrany amin'ny tranonkala. Rehefa mandefa sary ao amin'ny Weebly ianao, dia ataovy izay hahazoana antoka fa mifanandrify amin'ny URL ny URL. Amin'izany fomba izany, ny URL-nao sary dia hiseho toy ny www.abc.com/yourfilename.jpg. Io dia iray amin'ireo fitaovana lehibe indrindra amin'ny SEO ary tokony hampiasaina tsy tapaka.
Ny halehiben'ny saryo dia tokony handanjalanja ary tokony hifanaraka amin'ny votoatin'ny tranonkalanao. Raha manana sary kely ianao, azonao atao ny mamolavola azy ireo amin'ny fampiasana fitaovana sasany toy ny Preview for Mac sy ny hafa. Matetika, saripika sary an-tsary ny olona mba hanomezana endrika azy ireo amin'ny fomba mahatalanjona sy feno. Misy fitaovana maro be hita ao amin'ny aterineto izay afaka manampy anao hanova sy hanova ny sary. Ankoatra izany, Weebly dia mametraka ny fototra sy ny sary an-tsoratra amin'ny endriny tsara indrindra, ka tsy mila manahy momba ny fametrahana sary maromaro.